I-Pollfish: Ungaluhambisa njani uPhando lwehlabathi kwi-Intanethi ngokufanelekileyo ngeSelfowuni | Martech Zone
NgeCawa, ngoMatshi 5, 2017 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 URay Beharry
Udale uphando olwenziweyo lwentengiso. Ngoku, uza kulusasaza njani uphando lwakho kwaye ufumane inani leempendulo ngokukhawuleza?
I-10% ye-18.9 yeebhiliyoni zeedola zophando zentengiso zichithwe kuphando lwe-Intanethi eMelika
Unele ngaphezulu kwamaxesha amaninzi kunokuba uye kumatshini wekofu. Uyile imibuzo yophando, uyile yonke indibaniselwano yeempendulo- kwaye ugqibezele ukulandelelana kwemibuzo. Emva koko uphonononge uphando, walutshintsha uvavanyo. Ukwabelane ngovavanyo nomnye umntu ukuba ujonge kwakhona, kwaye mhlawumbi uyitshintshe kwakhona.
Ke ngoku, igqibelele. Kuya kufuneka ufumane ubukrelekrele bomthengi obufunayo, kubantu ofuna ukufikelela kubo. Inye kuphela ingxaki – usasaza njani isaveyi yakho ukuze ufikelele kubantu abalungileyo?
Ungazama ukuhambisa isaveyi yakho nangayiphi na okanye ngokudibanisa ezi ndlela zilandelayo:
Uphando ngomnxeba. Kodwa bambalwa abantu abaphendula iifowuni ezivela kwinombolo engaqhelekanga, kuncipha ukusebenza kwale ndlela kwiminyaka yedijithali.
Udliwano-ndlebe lomntu. Ezi zichitha ixesha, kodwa zinokusebenza. Unokufumana iimpendulo ezinzulu kwaye ulinganise iimpendulo kunye nolwimi lomzimba, kodwa oku kuthintela ukubonakaliswa kwakho kubaphulaphuli ababanzi, kwaye le ndlela ixhomekeke kukhetho lodliwanondlebe.
Iivoti zosasazo zasekuhlaleni Ungasebenza, kodwa awunakho ukubuza imibuzo emininzi, kwaye unokubekelwa umda kubaphulaphuli babantu oqhagamshelene nabo.
Iintengiso zikaGoogle. Ngokwenyani ungabhengeza uphando lwakho ngeAdWords, kodwa oku kungabiza kakhulu, kuba akukho siqinisekiso sokuba abantu abacofa intengiso bazakuyigqiba kuvavanyo. Kuya kufuneka ulunge ngokwenyani ekubhaleni ikopi ukuze abantu bacofe intengiso, kwaye kufuneka ukhuphe omnye umntu ngamagama aphambili afanayo.
Amaqonga eSaveyi ezikhoyo kwi-intanethi kwaye zifikelela kubantu nge-imeyile okanye kwiwebhusayithi yomntu wesithathu. Umzekelo, esanda kukhutshwa Uphando lukaGoogle 360 -Ulongezo olukhulu kwisuti yeGoogle Analytics-iyakwazi ukufikelela echibini labaphenduli abakwi-Intanethi abazizigidi ezili-10. Nangona kunjalo, esi sixhobo sithintelwe ngababukeli abancinci ukuba sikwazi ukufikelela kuso (ngokwembono, ziipesenti ezi-3 kuphela zabemi baseMelika).
Uya kuqaphela ukuba iselfowuni ayikhankanywanga konke konke kuluhlu olungentla. Imfonomfono yindawo engabhaliswanga kwimizi-mveliso emininzi, kwaye uphando lweemarike, ngakumbi, lucothisile ukutshintsha iindlela zalo- ngezizathu ezahlukeneyo. Amashishini kunye nabathengisi bedijithali baqala nje ukuluqonda uhambo lwabathengi ngaphesheya kweselfowuni, kunye nendlela abanokuyisebenzisa ngayo le ndlela intsha yokunxibelelana ngokusondeleyo ngakumbi 24/7.
Ngokusebenzisa amandla eselfowuni, isizukulwana esilandelayo sezixhobo zokuphonononga sinokubamba ngobukrelekrele ngakumbi kwaye sijolise kumacandelo abalulekileyo kubathengi, avumela amashishini ukuba abele ngcono uhlahlo-lwabiwo mali kwaye avelise iziphumo abazidingayo ukulungiselela abathengi babo ngcono.
faka I-Pollfish -Iqonga lophando elikhokelayo elinikezela uphando olunzulu kwi-intanethi kwisantya sombane ngokusebenzisa ii -apps zeselfowuni kwinqanaba lehlabathi. NgePollfish, ungasasaza uphando olwenziweyo kwimakethi olufikelela kubantu apho bachitha ixesha labo kakhulu-kwiselfowuni.
I-Pollfish ithatha indlela eyahlukileyo yokufikelela kubaphenduli bophando, njengoko ixabisa amava omsebenzisi kwaye ifuna ukubonelela abaphandi bezentengiso ngobukrelekrele babathengi obuphezulu.
Nantsi into eyenziwa yiPollfish ngokwahlukileyo
Ayifuneki okanye ihlawule iipaneli
Ayikhuthazi uphando ngeendlela ezihlawulelweyo ezinje ngemidiya yoluntu, iiNtengiso zikaGoogle, okanye abantu abadibeneyo
Ayinyanzeli abantu ukuba baphendule kuvavanyo ukuvula umxholo weprimiyamu
Ayibhatali abaphenduli ngophando ngalunye, okanye ukuthunyelwa
Mhlawumbi eyona nto inomdla, inethiwekhi yophando lwePollfish inokufikelela ngaphezulu kwezigidi ezingama-320 zabasebenzisi beefowuni eziphathwayo kwihlabathi liphela-ngexesha langempela. Ke ngoku iPollfish ilufikelela njani uthungelwano lophando olukhulu emhlabeni?
Iqonga lenza ukuba umpapashi weapp akhuthaze umphenduli ngokuthatha inxaxheba kwezi ndlela zimbini:
Abapapashi banako dlala kunye nokubonelela imivuzo engaphakathi nohlelo ukuthatha inxaxheba
Abaphenduli bakhuthazwa ukuba baphendule kuvavanyo kwaye bangeniswe umzobo ongacwangciswanga
Ngokusebenzisa le ndlela, iPollfish ifumene umndilili wokugqitywa kovavanyo lwama-90% -ngaphezulu kunomyinge wecandelo:
I-Pollfish ifumana abaphenduli abangcono-Babandakanyeka kwi-app kwaye banenqanaba eliphezulu lokuphendula kuba bengaphazanyiswa zezinye iimpembelelo zangaphandle. Ukongeza, abanamdla wokuvuthela kuvavanyo lwentlawulo ngenxa yenkuthazo engalunganga. Ukuba umxholo awuthandeki, bayaphuma kuwo kwaye babuyele kwiapp yabo.
I-Pollfish ifumana amaxesha okuphendula ngokukhawuleza (750 igqibezela njani uphando lwemibuzo eli-10 kwisandi seyure?)
I-Pollfish ibonelela ngamava angcono ophendulayo, kuba abaphenduli banokuthatha uphando kuluncedo lwabo, kwi-app, xa baziva ngathi, kuphononongo olwenzelwe izixhobo eziphathwayo.
Ke, zininzi iindlela zokuhambisa isaveyi yakho, kodwa inye kuphela enokufumana ukufikelela kwizigidi ezingama-320 ezingahleliwe, abasebenzisi abangaziwayo abaya kukunika idatha engcono kunye nokuqonda ngesihloko sakho sophando.
tags: gamificationdlalauphando lwehlabathiuphando lweselulapollImivuzo yokuvotaipollfishukuvotaumvuzosurveyinethiwekhi yophandoimivuzo yophandoZophando
Ndinomdla wentengiso, ubuchule, ubuchwephesha, ukubalisa amabali, kunye nokufunda ubomi bonke. Uphawu olubalaseleyo lomsebenzi wam kukuzisa umlingo wetekhnoloji kubaphulaphuli abangazange bayamkele ngaphambili. Ndifumanise ukuba zihlala njani, zahlulahlula, kwaye zinxibelelana ngokubalisa amabali abo kubudala bedijithali. Njenge-VP yokuThengisa, ubuchwephesha bam kuphuhliso lwesicwangciso seshishini, kunye nokwenza indawo yokubeka uphawu, amaqonga onxibelelwano, ukuqonda kwabathengi, kunye nohambo lwabathengi kwidijithali, nakwezentlalo.
Meyi 13, 2017 kwi-9: 02 AM
Ewe ulungile. Uphando olushukumayo luya kubamba ulwazi ngakumbi kunendlela yesiko kwaye iya kujolisa kubathengi abafanelekileyo ngokuchanekileyo. Njengamagama ayo, fumana iimpendulo ngendlela entsha ngakumbi.
Mar 31, 2020 ngo-3: 57 AM
Ngokwenyani ndiyavumelana nawe, iiNtengiso zikaGoogle zokuKhangela, uphando ngomnxeba, udliwanondlebe lomntu, iwebhusayithi yeqela lesithathu kunye nokuvota kweendaba zosasazo ziyinkqubo yovavanyo kodwa le nkqubo iyabiza okanye ichitha ixesha. uphando olushukumayo luya kujolisa kubathengi nabaphulaphuli abafanelekileyo